Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Governemanta kitoatoa
Politika : Governemanta kitoatoa
24 no isan’ny minisitra tao amin’ny governemanta teo aloha. Amin’izao fanovana izao dia nitombo 32 izany. Misy minisitra 8 hafa izany no nanampiana azy ireo. Aiza ny vola ho entin’ireo minisitra hanatanteraka ny asa hataony amin’izany. Iarahana mahalala fa ny fampiasana ny volam-panjakana dia tsy maintsy mandalo ny fankatoavan’ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona. Ny vola avy any ivelany omena an’i Madagasikara aza dia tsy maintsy mandalo amin’ity andrimpanjakaa ity vao azo ampiasana. Raha tsy vita izany fankatoavana sy famoahana lalàna izany dia tsy mahazo mampiasa vola ny fanjakana na dia ariary aza. Fanodikodinam-bola panjakana na halatra na Kolikoly raha toa ka tsy manaraka izany fenitra izany.
Raha tsorina ny zavatra misy amin’izao fotoana izao ireo hoan’ny minisitra vaovao miisa valo ireo dia hanara-dalàna ny vola hampiasany raha toa ka misy. Ny volana desambra 2021 indray vao mandrafitra ny teti-bolam-panjakana hampiasana ny taona 2022. Ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana 2021 dia efa vita ny volana jona 2021 lasa teo ka mbola tsy tafiditra amin’ny fandaniana amin’izany ny mahakasika ny ministera valo vaovao ireo.
Tsy ny vola ihany no olana fa ny fizarana ny olona hanatanteraka ny asa koa. Iarahana mahita fa ady be amin’izao fotoana izao no mitranga ao amin’ny minisitrin’ny tontolo iainanana sy ny fampandrosoana maharitra ary ny minisitra lefitra ho an’ny tontolo iainana. Toa izany koa ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny minisitra lefitra momba ny tanora.
Ny lafiny fitantanana indray dia mbola miandry ny fahavitan’ny mpitsopitsony ara-teknika sy araka ny fitantanana vao afaka mampiasa vola ireo ministera nozaraina roa sy nosarahina.
Ao anatin’ny volana telo na efatra eo raha akaiky indrindra vao ho vita ny fandaminana amin’izany. Ho hitantsika eto n y tohiny fa sarotra ny hinoana fa avaka hiady amin’ny fahantrana io governemanta io. Hampitombo ny fahatrana no taratra hita avy aty ivelany aloha hatramin’izao. Izany no governemanta kitoatoa. Manginy fotsiny ny olana tamin’ny fanendrena azy ireo.